USA oo khubaro milateri u diraysa Ciraaq - BBC Somali
Madaxweyne Obama ayaa sheegay in Mareykanka uu u diyaar garoobayo in uu qaado howl gal milateri oo cad oo ay ka geysanayaan gudaha waddanka Ciraaq haddii loo baahdo, hasayeeshee waxa uu dib u sharciyeeyay in ciidammada Mareykanka aanay dib ugu laabanayn dalkaa si ay u qaadaan dagaal.
Mr Obama ayaa sheegay in Mareykanka uu la wadaagi doono sirdoonka uuna diri doono ilaa iyo 300 oo la taliyayaal dhanka ciidammada milateriga ah si ay uga caawiyaan dowladda Ciraaq dagaalka ay kula jirto maleeshiyada sunniyiinta ah ee qabsaday qeybo badan oo dalka ah.
Waxa uu sheegay in Mareykanka aanu dooranin hogaamiyayaasha Ciraaq, balse dadka haysta ajande loo dhan yahay ay hogaamin karaan dalka xilligan ay xiisadda taagan tahay.
Waxaa jiray codsiyo ay ku baaqayeen siyaasiyiin Mareykan ah oo ah in uu iscasilo ra'iisul wasaaraha Ciraaq, Nouri al Maliki.
Sheekh Cali Xaatim al-Suleiman, waa hoggaamiye qabiil Sunni ah ee dalka Ciraaq, waa amiirka qabiilka Dulaym ee gobolka Anbaar, waxa uu ka faalooday hadalka Madaxweyne Obama.
Waxuuna sheegay in qudbada madaxweyne Barack Obama aanay ku salaysnayn xaqiiqda ka jirta dalka Ciraaq.
Sheekh Cali Xaatim ayaa intaasi raaciyay in dhibka kaliya ee Ciraaq ka jira uu yahay ra'iisul wasaare Nuiri Al-maliki, Sheekhan ayaa sheegay in xaalada maanta Ciraaq ka taagan ay tahay tii ugu darnayd ee abid soo marta.
Ciraaq: ISIS oo qabsatay Tal Afar